Somalia Archives - Page 134 of 191 - Puntland Mirror Believable Media Website
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed cali ayaa safar shaqo ku tagi doona magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari maalinta Jimcada, sida ay ilo-wareedyadu sheegaayaan. Inta uu safarkiisa Boosaaso ku guda jiro, Madaxweyne Cabdiweli […]
December 28, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya Cumar Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaan (Cumar Dhagey) ayaa sheegay in xubnihii dhawaan la joojiyay doorashadooda aysan kamid ahayn xildhibaanadii shalay lagu dhaarshay Muqdisho. “Xubnaha 11-ka kursi […]
December 27, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa diyaarinaya mooshin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka Cabdixakiim Cumar Camay si ay xilka uga qaadaan, iyaga oo ku eedeeyay dastuurka inuu ka xadgudbay, sida uu sheegay xildhibaan. Xildhibaan […]
Jubbaland oo ciidamo u dirtay deegaano ay Al-Shabaab kula dirirtay dad xoolo dhaqato ah
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Jubbaland ayaa ciidamo boqolaal ah u diray deegaamo ay dhawaan ku dagaalameen dad xoolo dhaqato ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam sidoo kale ah taliyaha ciidamada Jubbaland ayaa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah la filayaa in la dhaariyo. Baarlamaanka cusub ayaa munaasabada dhaarintoodu waxay ka dhacaysaa xarunta ciidanka booliiska ee Janaraal Kaahiye ee Muqdisho, […]
Ciidamada NISA oo xiray maskaxdii ka dambaysay weerarkii dekada Muqdisho
December 27, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Haayada Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa soo qabtay maskaxdii ka dambaysay weerarkii Al-Shabaab ee dekada Muqdisho bilowgii bishaan. Taliyaha NISA ee gobolka Banaadir Maxamed Xasan Faran-fir ayaa xaqiijiyay xiritaanka, sida ay kasoo […]
December 26, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo askari ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaal u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Dagaalka oo salka ku haya muran u dhaxeeya labo sargaal oo ciidamada […]
Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay dilkii xeer ilaaliyihii ciidamada
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa uga tacsiyeeyay dadweynaha Puntland, asxaabtii iyo qoyskii xeer ilaaliyihii maxkamada ciidamada Puntland Cabdikariim Xuseen Firdhiye, kaasoo lagu dilay Boosaaso shalay oo Axad ahayd. Madaxweynaha ayaa tilmaamay […]
December 25, 2016 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dablay ka tirsan Al-Shabaab oo baastoolado ku hubaysnaa ayaa magaalada Boosaaso maanta oo Axad ah ku dilay xeer ilaaliyihii maxkamada ciidamada ee Puntland Cabdikariim Xasan Firdhiye, sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Xeer ilaaliyaha ayaa […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Cabdirisaaq Xuseen Tahliil oo loo yaqaan Caloolgeel, sida uu laanta Af-Soomaaliga ee VOA u sheegay guddoomiyaha maxkamada ciidamada Cawil Axmed Faarax. Caloolgeel ayaa lagu [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Roobab fiican ayaa ka da’ay qaybo kamid ah gobolada Puntland ee Soomaaliya intii lagu guda jiray 24-kii saac ee lasoo dhaafay. Sida ay dadka deegaanku sheegeen, roobka ayaa ka da’ay qaybo kamid ah [...]